ကိုဗစ်ကာလမှာ မိန်းမနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့ အကူအညီလိုနေတဲ့ ဇွဲနိုင် | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ကိုဗစ်ကာလမှာ မိန်းမနဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့ အကူအညီလိုနေတဲ့ ဇွဲနိုင်
ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ ဇွဲနိုင်ပါ။ အသက်ကတော့ ၂၉ နှစ်… ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်သည်ပါ။ ဇနီးသည်နဲ့ လက်ထပ်ထားကတော့ ၆လလောက်ရှိတော့မယ်။
အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့အတွက်ဆို လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝဖို့ကလဲ အရေးကြီးတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အနေကြာ ရင်းနှီးကျွှမ်းဝင်လာတာနဲ့အမျှ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ တော်တော်များများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
တခါတလေမှာတော့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တချို့အကြောင်းတွေကို ဗဟုသုတများတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မျိုးမင်း နဲ့ မေးမြန်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာ… ဒီကောင်က အရင်တုန်းက စင်ကာပူက ဆေးရုံတစ်ခုရဲ့ မျိုးဆက်ပွားရောဂါကုသရေးဌာနမှာ Nurse အဖြစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့…. ခုတော့ ဒီကောင် အိမ်ထောင်ကျပြီး ဒီမှာပဲ အခြေချနေတယ်။ ဒါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီတခေါက်လဲ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်တာရှိလို့ တိုင်ပင်ဖို့ အတွက် သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ရတော့တာပေါ့။
ကျွန်တော်။ ။ ဟယ်လို… ဟယ်ရောင် သားကြီး နေကောင်းရဲ့လားကွ…
မျိုးမင်း။ ။ ကောင်းပါ့ကွာ… ကိုဗစ်ကြောင့် အိမ်ပြင်မထွက်ရတာက လွဲလို့… အိမ်မှာပဲ ငူငူငိုင်ငိုင် ပျင်းနေတာနဲ့အတော်ပဲ။ ဘာလဲ? မင်းရဲ့ မိန်းမိန်းနဲ့ ပြဿနာတက်လို့ ငါ့ဆီက အကြံဉာဏ်တောင်းဦးမလို့လား? ဟား ဟား….
ကျွန်တော်။ ။ ခွေးသား မင်းကတော့ အရင်တိုင်းပဲ။ ဘာပြဿနာမှမတက်ဘူးကွ။ အဆင်ပြေလွန်းလို့တောင် ခက်နေတာ… ငါ ဒီတခေါက်ကတော့ သိချင်တာလေးလဲ ရှိတာနဲ့ မင်းကို ဖုန်းဆက်လိုက်တာ… မင်းက ဆရာကြီးဆိုတော့…
မျိုးမင်း။ ။ ဆိုစမ်းပါဦး…
ကျွန်တော်။ ။ ဒီလိုကွ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ငါတို့ လင်မယားက အတူနေတိုင်း ကိုယ်ဝန်တားဖို့အတွက် ငါ့ဖက်က ကွန်ဒုံးပဲ သုံးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကွာ။ ခုတလော မိန်းမက ငါကွန်ဒုံးစွတ်ပြီး သူနဲ့ အတူနေတိုင်း ရော်ဘာနံ့ ရတယ်ဆိုပြီး ပြောပြောနေလို့ ငါ့ကောင်ရေ။ ဒါ့ကြောင့် အနံ့ပါတဲ့ကွန်ဒုံးကို စမ်းသုံးကြည့်မလားလို့။ တခါမှလဲ မသုံးဖူးတော့… စေျးကွက်ထဲမှာ ပါးလွှာတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေ၊ သုက်လွှတ်တာကို တဖက်တလမ်းက ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်ဒုံးတွေ ရှိတာသိပေမယ့် အနံ့ပါတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေက အတူနေတဲ့အခါမှာ ဘာတွေ ထူးခြားသွားနိုင်လဲ ဆိုတာကို သိချင်တာ…
မျိုးမင်း။ ။ ဒီလိုကွ… အနံ့ပါတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေက အနံ့ပါတယ်ဆိုမှတော့ သာမန်ကွန်ဒုံးထက် ထူးခြားတယ်ဆိုတာအပြင် နောက်တစ်ခုက ဒီလို Flavored ကွန်ဒုံးတွေကို ထုတ်လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ကို အဓိကရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အလေ့အထရှိတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ကွဲ လက်ထပ်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ၊ အတူနေချစ်သူရည်းစားတွေအတွက် ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ လိင်ကူးစက်ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့၊ နဂိုထက်ပိုပြီး အနံ့နဲ့ဆိုတော့ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေဖို့ ထုတ်ထားတာပေါ့ကွာ။ ကွန်ဒုံးစွတ်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ မဆက်ဆံတာကတော့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပေါ့…
ကျွန်တော်။ ။ ဟာ ဟုတ်လား? ဒါဆိုရင် အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက်လဲ ဒီလို Flavored ကွန်ဒုံးမျိုးတွေကို အနည်းဆုံး မကြာခဏတော့ သုံးဖူးကြည့်သင့်တဲ့ သဘောပေါ့။ သမားရိုးကျ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲ အနံ့လေးပါတော့ သူရော ကိုယ်ရော စိတ်ခံစားမှုလဲ ပိုကောင်းမှာပေါ့။ ဒီတော့ မင်းက ဆရာကြီးဆိုတော့… ငါ့လို မနူးမနပ်အိမ်ထောင်သည်ကို Product Recommend လေး လုပ်စမ်းပါဦးကွ…
မျိုးမင်း။ ။ စေျးကွက်ထဲမှာတော့ အနံ့ပါတဲ့ ကွန်ဒုံးတွေက ရွေးချယ်စရာတော့ အများသားကွ…. အေး! မင်းက ငါ့လိုဆရာကြီး Recommend လုပ်တာမှ သုံးချင်ရင်တော့ Kiss အမှတ်တံဆိပ် Flavored ကွန်ဒုံးတွေ သုံးပေါ့ကွာ။ ငါသုံးဖူးတာတော့ Kiss Juicy Mango ကိုပဲ သုံးဖူးတယ်။ သူက ကွန်ဒုံးကိုလဲ ပါးလွှာတဲ့ရော်ဘာသားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့အပြင် သရက်သီးနံ့လေးကို ခံစားရင်း မိန်းမနဲ့ အတူနေရတော့ စိတ်ခံစားမှုပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ…
ကျွန်တော်။ ။ မင်းကတော့ Expert ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြောလဲ ပြောတတ်တယ်… သိချင်တာတွေ ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးသားကြီးရာ… ငါလဲ အခုပဲ အွန်လိုင်းကနေ Kiss Juicy Mango ကို မှာလိုက်တော့မယ်ကွ…